japanSamachar | विचार/ब्लग/अन्तर्वार्ता | बोलमायाँ गित बिवादमा प्रकाश सपूतले शम्भु राईलाई खुलापत्र लेख्दै भने-'दर्शक भजाउँदै मिडिया जुधाएर कबड्डी नखेल्नुस्'
(JAPAN) 16 th October | 2019 | Wednesday | 7:27:03 PM
(Nepal) 16 th October | 2019 | Wednesday | 4:12:03 PM
बोलमायाँ गित बिवादमा प्रकाश सपूतले शम्भु राईलाई खुलापत्र लेख्दै भने-'दर्शक भजाउँदै मिडिया जुधाएर कबड्डी नखेल्नुस्'
POSTED ON : Thursday, 20 June, 2019 | Views : 232
अं साच्चि भाका मिलेको प्रंसग । गाउमै हुदा सुनेको भनेर तपाईलाई मख्ख पार्दिन सर । काठमाण्डौ आएर दोहोरी साझमा काम गर्न थाले पछि हजुरका धेरै गितहरु सहकर्मिहरुको आवाजमा सुनियो । आफुलाई रहर लागेर खोजी खोजी ओरिजिनल गित सुनेर डायरिमा गित टिपेर पनि गाईयो । चिठि तिम्लाई र तिमिले सम्झेनी लाखै छ भन्ने अक्सर अफर आउथ्यो दोहोरीमा सहकर्मिले गाउथे म अभिनय जस्तो गर्थे ।हल्का रक्सिले मातेको बेला यस्तो गितले अझै छुने रैछ कि मान्छेलाई कुन्नि ? पैसा पनि राम्रै झर्थ्यो । म चाहि रहरले चलेछ बतास सुस्तरी गाउने प्रयास गर्थे । त्यसको पुरै अन्तरा याद छ सर मलाई । कतै माहोल जुरेछ भने म हजुरलाई सुनाम्ला गाएरै । तर कुन क़सम खाएर भनौ सर यो देउसी भैलो गित मैले सुनेको थिएन । त्यसैले मैले कपि गरेको हुदै होईन ।
पहिलेनै रेकर्ड भैसकेको कुनै गित पुन रेकर्ड गर्छु र हिट बनाउछु भन्ने आत्मविश्वास कसैमा हुन्छ जस्तो लाग्दैन सर । बरु पुरानो हिट गितलाई रिमेक गर्ने, कभर गर्ने चलन बढेको छ । यो कति सहि गलत -त्यता नजाउ मैले यहाँ जोड्न खोजेको चाहि पहिला त्यति नसुनिएको, सफल नभएको गितलाई रि रेकर्ड गरेर चलाईदिन्छु भन्ने कन्फिडेन्स ममा छैन सर । त्यो रिश्क तपाईले त्यति खेरै लिनु भयो । अब मैले किन लिन्थेर ! अहिलेत झन ख़र्च बढेको छ सर । कलाकारको भाउ र पारिश्रमिक ह्वात्तै बढेको छ । खर्च उठाउने विजनेश वे छैन । उसबेला जस्तो क्यासेटमा साईन गरेर पठाएको अनुभव हामीले गर्न पाईएन सर । अहिलेको अबसर र चुनौती भनेको मैल माथी जोडिसके तेई ‘भाईरल ‘ हो । त्यो पनि फिरिको ।
म्युजिक उठेर गित भनेर म्युजिक मै सकिदा पनि पुर्ण गित हुन्थ्यो चिठि तिम्लाई… ताका । अहिले चिठिको चलन हराएर भिडियो च्याटको जमाना भएर होकि सर गितको अगाडि पछाडि यस्सो नाटक नजोडि त गित नै पुर्ण नहुने जस्तो पो भैसक्यो । ख़ैर, म फेरी जोड्न चाहन्छु मैले ठ्याक्कै गित सुनेर कपि गरेको हुदै होईन सर । डिट्टो कपि पनि छैन गित ।
मैले नेपाली सांगितिक इतिहासको बारेमा त्यति अध्ययन गरेको त छैन तर तपाई भन्दा अझै अग्रज, तपाई र म सम्म आउदा नेपाली संगित र विशेषत: लोक गित सिर्जना गर्ने ति तमामा अग्रजहरु बाट प्रभावित हुदै नै हामीले गित सिर्जना गर्ने हो । तपाईहरुले बडो दुख गरि खनेको बाटोमा हामी सजिलरी हिड्न पाएका छौ । यस्सो खाल्डाखुल्डि पुर्ने र सके कालोपत्रे गर्ने ज़िम्मेवारी बोध पनि गरेका छौ । तपाईहरुकै बाटोमा हिड्दै गर्दा तपाईहरु जस्तै जस्तै देखिनु स्वभाविक हैन र सर ?
अहिले समय अलि बदलिएको छ सर । गितसंगितमा भीड़भाड़ छ । किनकि बाटो सजिलो भएको छ । जो कोहि जा कहि बाट आउन मिल्ने भएर पनि होला । त्यसमाथी हाम्रो पुस्ताको रुचि फेरी डेन्जर- डेन्जर छ सर । यस्तो अवस्थामा गल्बन्दी जस्तो मौलिक लोक गित यो लेभलमा स्वीकार्य हुनु पनि एउटा उपलब्धि हो सर । आफ्नो व्यवसायीक नाफा घाटा नहेरी सांस्कृतिक महत्व बचाउन सबै बिधि पुर्याएर ३२/३५ मिनेटको तिहार गित बनाउन तपाईलाई जरुरी थियो र सर ? तिमीले सम्झेनी लाखै छ जस्तो अर्को खत्रा आधुनिक गित दिएर आरबीटि बाट झ्याम्म दाम बुझ्न सक्नुहुन्थेनर ?
म्युजिक नेपालसंग राम्रै छ सम्बन्ध तपाईको तर तपाईलाई कलाकारिता गर्दा केबल नाफा घाटा मात्रै भन्दा पनि नेपाली लोक संगितको ! नेपाली मौलिक कला संस्कृतिको बिछट्टै माया रैछ सर । त्यति माया गर्ने मान्छेले एउटा अनुज भाईले अहिलेको समयमा मौलिकता झल्काउन गरेको प्रयासलाई अलिकति भाकाको प्रसंग लिएर निरुत्साहित नगरिस्योन । हजारौ प्रकाश सपुत आए पनि तपाईको ईतिहास र अस्तित्व मेटिन्न सर । ल मानम कसैले अझै मिठो गरि चिठि तिम्लाई दुरुस्त निकालेछ भनेपछि तपाई मेटिनुहुन्न सर । तपाईको अस्तित्व आउछ आउछ ।
लेख्दा लेख्दै मोबाईलको व्याट्रि २ प्रसेन्ट भएछ । समय बिहानको ४:३४ ! र अन्त्यमा, तपाईले बोलाएका फोरमहरुमा म उपस्थित हुन तयार छु सर, छलफल का लागि बहसका लागि, संगितको शुद्दिकरणका लागि, कपराईटको कानुन कार्यान्वयनका लागि र अग्रजहरुको सम्मान का लागि ।
तर यो मेरो वर्किङ आवर्स हो सर । सिर्जनशिल हुन सक्ने र सोहि अनुसार दौडिन पनि सक्ने उमेर हो मेरो । यो समयमा मलाई नअल्झाईस्यो न सर । म पनि केबल नाफा घाटा मात्रै भन्दा पनि केहि फरक र राम्रो गर्न सकिन्छ कि भनेर धेरै रात अनिदो बस्छु । गल्बन्दी को लागि पनि मैले धेरै नै मेहेनत गरेको छु सर ।
जहाँ सम्म नाम राख्ने कुरा छ । यो धेरै लोक भाकाहरुबाट प्रभावित छ सर । यता पश्चिम तिरको भजनको ताल र रत्यौलीको लय मिस्रित छ भने हजुरको देउसी बाट पनि प्रभावित भएछ । अब कसकसको नाम राखौ सर । नाम में क्या चिज हे ? अब यसै पनि आजको मिती सम्म सबै भन्दा छोटो समयमा करोड़ क्लबमा जाने गित कुन हो भन्ने प्रश्नमा उत्तर आउछ – गल्बन्दी । तर उत्तर यति मै सकिदैन ।
“ ए त्यो शम्भु राई संग मिलेको गित “ भनेर आउने भैक्यो । विश्वास बिचित्रको चिज हो सर । यो निकै ज़रा गाडेर बसेको हुन्छ मानीसहरुमा । अब तपाईले मिलेकै हो भन्ने प्रमाणित गरे पनि मिलेको छैन भन्नेलाई विश्वास लाग्दैन । मैले हैन मिलेकै छैन भनेर चिच्याय पनि गित उस्तै उस्तै सुन्नेको कान फेर्न सक्दिन । त्यसैले एउटा सिर्जना माथी दर्शक स्रोताको चासो, चिन्ता र माया सम्झेर यो प्रसंग यहि स्वतन्त्र छोड़ौ न सर ।
म तपाईलाई असाध्यै सम्मान गर्छु । तपाई मलाई प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु । आगामी सिर्जनाको लागि सचेत बनाउनु भएकोमा धन्यबाद सर । तर म र म जस्तै नया पुस्तालाई डर पैदा नगरिदिनु होला । जो गितसंगित मा केहि गरौ भन्ने हुटहुटिले लामो संघर्षपछि अलिअलि तंग्रिएका छौ ।